How to Steal HTTP Botnets ( သူများထောင်ထားတဲ့ Botnets ခိုးရအောင် ) | Myanmar Black Hacking
0 How to Steal HTTP Botnets ( သူများထောင်ထားတဲ့ Botnets ခိုးရအောင် )
HTTP Botnets တွေကိုတော့ အားလုံးသိကြမှာပါ ...
ဒီတစ်ခေါက်ပြောမှာကတော့ ... သူများတွေ ထောင်ထားတဲ့ Botnet တွေကို ဘယ်လိုခိုးမလဲဆိုတာပေါ့ ... ဟီး ဟီး တောက်ကျင့်က အဲလိုမကောင်းတာ
အရင်ဆုံးတော့ Botnet တွေရဲ့ သဘောတရား၊ file structure တွေကိုတော့ နားလည်ထားရမယ်။ အသုံးများတဲ့ botnet တွေအကြောင်းလဲ သိထားရမယ်။
botnet တွေမှာ index.php ဖိုင်နဲ့ login.php ဖိုင်ဆိုပီး ရှိတတ်တယ်.. ပြီးတော့ sql ဖိုင်ဆိုပြီး ရှိကြတယ်။ ဒါက ယေဘုယျ အားဖြင့်ပါ။ ဒါတွေချည်းပဲတော့မဟုတ်ဖူးပေါ့ .. design ပိုင်းအတွက် css ဖိုင်တွေ bot တွေလာချိတ်ဖို့ အတွက် သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ ဖိုင်တွေ ရှိကြပါတယ်။
အဓိက ကတော့ index ဖိုင်ပဲ .. အဲမှာ ပါတတ်တဲ့ source code တွေ ရှိတယ်။ ဥပမာ Cythosia botnet ဆိုရင် index ရဲ့title မှာ Cythosia V2 Webpanel - Login စသဖြင့် ရှိကြတယ်။ အဲဒီ info လေးတွေကို ကြည့်ပြီး dork တစ်ခုရေးသွားတာပါ ..
intitle:Cythosia V2 Bot Webpanel - Login
intitle: Andromeda bot webpanel
intitle: Athena+ intext:Password
အဲဒီ dork လေးတွေသုံးပြီး ရှာကြည့်ပါ ... သေချာတာကတော့ site.com/panel/ စသဖြင့် ရှိတတ်တာ သေချာပါတယ်။
အဲဒီကနေ သွားရင် ဘယ်ကိုရောက်လဲဆိုတော့ botnet ရဲ့login ကိုရောက်ပါတယ်.. password တွေအတွက် ခက်ခက်ခဲခဲ မစဉ်းစားနေပါနဲ့ .. အများစုက default password တွေပါ .. admin, root, စတာတွေပါပဲ...။
အဲလို botnet တွေကို ရပြီဆိုပါတော့ ... အကြံပေးချင်တာက အဲဒီ့ slaves/zombies တွေထဲကို ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် bot တွေကို မောင်းသွင်းလိုက်ပါ။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ဒါမျိုးက လူတကာ တွေ့ နေမှာလေ. ခင်ဗျားတွေ့ တဲ့ botnet ရဲ့ login password ကိုလဲ ခင်ဗျား ပြောင်းလို့ ရတာမှမဟုတ်တာ။
ကျွန်တော်ပြထားတဲ့ dork တွေက နည်းပါသေးတယ်။ botnet တွေကိုယ်တိုင်လုပ်ဖူးတယ်ဆို သူတို့ရဲ့structure တွေကိုကြည့်ပြီး ကိုယ်ပိုင် dork တွေရေးလို့ ရပါတယ်။ Zeus botnet တို့warbot တို့ ဆိုလဲ လူသုံးများပါတယ်။ သူတို့ကိုတော့ ကျွန်တော်မစမ်းဖူးလို့ dork မရေးတတ်ပါဘူး။
Special Thanks To MSF ( Myanmar Security Forum ) MoE TAiN
Labels: Botnet . Hacking Tutorials . Knowledge